BNI MADAGASIKARA : Manakaiky ny mpanjifa hatrany amin’ny alalan’ny “Credit fety”
Mikatsaka ny mahasoa ho an’ny mpanjifa ao aminy hatrany ny eo anivon’ny banky BNI Madagasikara. 5 décembre 2018
Ankatoky ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona tokoa izao isika ka misokatra indray ny tolotra “ credit fety” andiany fahatelo, hanasana ny rehetra . Izy io dia tolotra fampindramam-bola ahafahana miatrika ny fanomanana fety, nanomboka ity vola desambra ity hatramin’ ny 31 janoary 2019 ho avy izao. Afaka mihazo ny ivon-toerana ahitana ny BNI daholo ireo izay liana amin’izany , eny fa na dia mbola tsy tafiditra mpikambana ao anatiny aza dia vonona hatrany izy ireo ny handray.
Fampindramam-bola isany miavaka izy ity satria 1% monja ny tahan-janabola isam-bolana nomena ny mpanjifa. Enim-bolana ka hatramin’ny enimpolo volana ny faharetan’ny famerenam-bola raha ny fanazavan’izy ireo hatrany. Izany hoe fotoana malalaka ny famerenana azy ary midika izany fa fitsinjovana sy fanomezana fahafaham-po ho an’ny rehetra amin’izao fety izao. Vola tsy misy fetra rahateo ihany koa no azo indramina saingy miankina amin’ny mpanjifa tsirairay hatrany, amin’ny alalan’ny fahafahana mamerina azy.
Ho an’ireo mpanjifa nanoratra anarana sy liana nanao ity tolotra iray ity nanomboka ny 3 desambra ka hatramin’ny 31 desambra ihany koa dia hisy ny lalao goavana hosarihana, hahazoana loka marobe isan-karazany. Izay mibata ny amboara tena tsara vintana kosa dia hahazo fitsangantsanganana ho an’olon-droa, fanomezana tsy ampoizina avy amin’ny BNI hatrany ary hiantohany iray manontolo.